Daawo:- Sheekh Maxamed Idiris oo sheegay in Taliyaha NISA uu culeys & bahdilaad ku haayo RW Rooble - Awdinle Online
Daawo:- Sheekh Maxamed Idiris oo sheegay in Taliyaha NISA uu culeys & bahdilaad ku haayo RW Rooble
Sheekh Maxamed Idiris oo kamid ah Culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay kulankii Xarunta Habar Khadiijo uu Taliyaha NISA fahad Yaasiin ugu yeeray Ra’iis Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Sheekha waxaa uu sheegay in nasiib xumo iyo bahdilaad ay tahay in Taliyaha NISA uu R’iisul Wasaaraha ku yiraahdo kasoo tag Xafiiskaaga we iigu imaaw Xarunta NISA si uu ugu yeeriyo waxaa uu doono.
Sidoo kale waxaa uu wax lala yaabo ku tilmaamay qoraalkii Maalin ka hor kasoo baxay siihayaha Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xildhibaan Sadiiq Warfaa ee ahaa in NISA ay ku amartya in la baarayo dhamaan Shaqaalaha Rayidka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Waxaa uu ku eedeeyay Sheekh Maxamed Idiris in Taliyaha Hay’adda NISA uu Siyaasadda meel xun gaarsiiyay, sidoo kalena inta uu wadanka joogo aysan ka dhaceen doorasho xor iyo walaal ah.
Dhamaan siyaasiyiinta ku sugan Magaalada Muqdisho ayuu ugu baaqay in ay iska aryan Fahad Yaasiin, isla markaana xabad kaga saaraan Magaalada Muqdisho.
Previous articleMeydka marxuum Cali Khaliif oo laga soo dejiyay Muqdisho
Next articleGuddoomiye Cusmaan Barre & Guddiga doorashooyinka Hir-Shabeelle oo kulan yeeshay